Ny fanakatonana COVID-19 vaovao any Netherland dia ho voalohany any Eoropa Andrefana hatramin'ny fahavaratra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany mikasika ny Netherlands » Ny fanakatonana COVID-19 vaovao any Netherland dia ho voalohany any Eoropa Andrefana hatramin'ny fahavaratra
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Zon'olombelona • Vaovao farany mikasika ny Netherlands • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny fanakatonana COVID-19 vaovao any Netherland dia ho voalohany any Eoropa Andrefana hatramin'ny fahavaratra.
Ny tompon'andraikitra holandey dia efa nampiditra saron-tava ary nanitatra ny lisitry ny toerana izay mitaky fahazoan-dàlana COVID-19 hahazoana fidirana.
Ny governemanta Holandey dia nanoro hevitra hametraka fanakatonana COVID-19 vaovao mandritra ny roa herinandro.
Ny governemanta Holandy dia handray fanapahan-kevitra momba ny fanakatonana vaovao manerana ny firenena rahampitso.
Nahita fisondrotan'ny tranga COVID-19 vaovao i Holandy miaraka amin'ny hopitaly maro tototry ny isan'ny marary.
Ny Netherlands dia mety ho firenena voalohany any Eoropa Andrefana nametraka fameperana fanakatonana manerana ny firenena nanomboka tamin'ny fahavaratry ny taona 2021, satria nitombo ny isan'ny tranga COVID-19 vaovao tao amin'ny firenena.
Filankevitry ny mpanolotsaina nasionaly momba ny areti-mifindra, Ekipa mpitantana ny fivoahana holandey (OMT), dia nanoro hevitra ny governemanta holandey hametraka fanakatonana tapa-bolana mandritra ny roa herinandro.
Araka ny vaovao voaray avy any an-toerana dia ny zoma izao no andrasana handray fanapahan-kevitra momba izany torohevitra izany ny kabinetran’ny praiminisitra mpiahy Mark Rutte.
Ny dingana voalaza fa hodinihina dia tsy ahitana ny fanakatonana sekoly, fa ny fanafoanana ny hetsika, ary koa ny fanakatonana ny teatra sy ny sinema. Ny kafe sy trano fisakafoanana koa dia holazaina hamerana ny ora fisokafany.
Taorian'ny fanakatonana naharitra roa herinandro, ny fidirana amin'ny toerana ho an'ny daholobe dia voafetra ho an'ny olona manana kaody QR vaksiny na ireo izay vao sitrana tamin'ny virus.
Ny vaovao momba ny torohevitry ny tontonana dia tonga toy ny Pays-Bas mahita fiakarana amin'ny tranga COVID-19, miaraka amin'ny hopitaly maro no tototry ny habetsahan'ny marary. Ny angon-drakitra tamin'ny volana oktobra dia nampiseho fa ny 70% amin'ireo ao amin'ny fikarakarana fatratra dia tsy vita vaksiny na ampahany fotsiny. Ny salan-taonan'ny olona tsy voan'ny vaksiny tany amin'ny hopitaly dia 59 taona monja, raha 77 taona ho an'ny marary voan'ny vaksiny.
Mihoatra ny 84% amin'ireo mihoatra ny 18 taona manerana ny Pays-Bas nahazo tifitra roa hanoherana ilay viriosy, araka ny antontan-taratasin'ny governemanta.